isan'ny seza ao hollywood casino amphitheatre seza tabilao
misy casino any etazonia virgin islands
"Matt nanao sonia ny taratasy [amin'ny an-tokotany] ary tsy mieritreritra be loatra momba izany seza slot dikany amin'ny teny urdu. Matio Thompson, ny racecourse bookmaker nandritra ny 15 taona, dia voarara ho an'ny 18 volana rehefa avy niaiky ny fandikana ny fitsipika.
Izany ihany koa dia nanaiky fa ny BHA "efa tsy lazaina fa ny kolikoly", fa "Thompson ny fandraisana anjara amin'ny mpampiofana raha tonga dia nanapa-kevitra ny handeha amin'ny fotoana roa amin'ny fiantrana foko, rehefa teo aloha dia tsy nanana traikefa ny hazakazaka mitaingina" ary izy dia "nanana ny teo aloha tsy misy tsiny an-tsoratra". Maha-za-draharaha eo amin'ny-mazava ho azy fa ny bookmaker, marina izany fa tokony ho fantatry ny fitsipika anatiny avy.
Ny Britanika Horseracing Fahefana (BHA) dia nidina mafy iray bookmaker voampanga amin'ny banga ny nametraka fitsipika. Izy no nanao ny levitra eo amin'ny 34 filokana ary ankehitriny izy dia nahazo ny hivarotra ny rehetra ny pitches ary ho telo ny fotoana feno mpiasa ny teny, satria tsy misy lalana afaka mitondra ny raharaha eo amin'ny 18 volana mirotsaka. Izany no ataony, dia mametraka ny maro ny soavaly maro ny foko. Fanambarana avy amin'ny mpitsara voatendry mba hihaino ny raharaha, dia nilaza fa ny filokana ao amin'ny fanontaniana hoe "izay misy ankehitriny kely isan-jato ny ankapobeny nandry betting". Ny fiampangana mifandray roa fiantrana foko amin'ny Bangor tamin'ny 2007 sy Newcastle tamin'ny taona 2008 isan'ny seza ao hollywood casino amphitheatre seza tabilao. Izy ireo dia hitafy mba hanangonam-bola ho an'ny hazondamosina fikarohana ratra manaraka ny nalemy ny jockey JP McNamara seza ao hollywood casino amphitheatre.
Nilaza fa zava-baovao ny bookmaking orinasa mety efa nanao azy kely tsy dia mazava-manapaka ary izany dia niafara tamin'ny fandraràna misy casino any etazonia virgin islands.